Ururka SOMJA Oo Cambaareeyay Xariga Idaacadaha Caabudwaaq. | Gedoonline
Ururka SOMJA Oo Cambaareeyay Xariga Idaacadaha Caabudwaaq.	Added by khabar on November 18, 2010.Saved under Latest News	Nairobi(GMN) Ururka warbaahinta casriga iyo saxafiyiinta Soomaaliya ee SOMJA ayaa canbaaraynaya xiritaanka ay xireen Maamulka Ahlu-Sunna Waljameeca ee degmada Caabudwaaq ee Gobolka Galguduud Idaacadaha Madaxbanaan ee Radio Caabudwaaq iyo Radio Badbaado oo ku yaallay degmada Caabudwaaq.
Xoghayaha guud ee Ururka Somali online Media and Journalist Association (SOMJA) Mohamed Ali Abdi (Royter) ayaa isaga oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya sheegay in ay tahay wax aad looga xumaado xariga labada Idaacadood ee Radio Caabudwaaq iyo Radio Badbaado, kuwaas oo ay aad ugu taxan yihiin dadka reer Caabudwaaq.
“Idaacaduhu waa indhaha bulshada mana haboona in la xiro bilaa ogaysiin la’aan maamulkooda wax yabaha lagu dhaliilayo ee waa in ay maamulka Ahlu-Sunna Waljameeca tixgaliyaan xoriyada saxaafada iyo xuquuqda saxaafada, taas oo ah mid muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed, waxaana si sharaf leh uga codsanaynaa Ahlu-Sunna Waljameeca in ay u ogolaadaan Idacadaasi in ay howlahooda sii wataan.” sidaasi waxaa hadalkiisa ku daray Xoghayaha guud ee Ururka Somali online Media and Journalist Association (SOMJA) Mohamed Ali Abdi (Royter).
Xariga Idaacadahan ayaa imanaya iyada oo ay hore maamulka Ahlu-Sunna warbaahinta gobolka Galguduud gaar ahaan goobaha ay ka taliyaan kusoo rogay amaro ay kamid yihin in aysan baahin karin warar ku saabsan maamulka Ximin iyo Xeeb,maamulkii dhowaan looga dhawaaqay dalka Kenya ee bartamaha Soomaaliya iyo in aan la oran karin Xarakada Mujaahidinta Al-Shabaab.
Maareeye Dhamac Faarax
Tell: +2547 2674 6126
Xoghayaha ururka (SOMJA) oo la doortay.
Ururka SYDC Oo Cambaareeyay Qaraxyda iyo Dagaalada Muqdisho.
Ururka Ahlu Sunna Oo Ku Kala Qeybsan Wadashaqaynta Dowladda KMG